No ilmo la'aan qiiq shumac fluted cad - Shiinaha Litbright Shumaca (shijiazhuang)
LED Shumaca Iyadoo Remote Midabada hoggaamiyo Shumaca
shumac LED Calan la Ivory Design Collection raaxo
qaabka Round luster eller flameless keentay
Ivory guurista dubaalad luminaire set shumac hordhigaya
Multi Harvest Dayrta Leaf LED Shumaca Tiir
8 inches koombada shumac diinta
Festival madaxtooyada tealight carafta leh iyo midab leh awoodo ...
shumacyo tealight 8g-23g midabka leh ee koob biraha
No ilmo la'aan qiiq shumac fluted cad
Basic Nooca Info Model No .: G65CL-0625D: Waxyaabaha tapered: Parafuun Wax Isticmaalka: Aaska, Holiday, HBS, Diinta, Wedding, xisbiga, Dhalashada, Laydhka Home, Qurxinta Function: Laydhka Color: dhadhan White: Size carfiso laheyn: 8 * 20cm gubasho Time: 8 saacadood Processing: Ballaca Makiinado, 2.2cm: Length: 22.5cm dheeraad ah Baako Info: shrinked ama baakadaha bacda soo saarka: 36tons Brand: Litbright Gaadiidka: Ocean, Land, Air, TNT oogeen UPS Place of Origin: Shiinaha Supply Kartida: 3 X 20'fcl Certifi ...
Qaabeeyaan No .: G65CL-0625D
Waxyaabaha: Parafuun Wax
Isticmaalka: Aaska, Holiday, HBS, Diinta, Wedding, xisbiga, Dhalashada, Laydhka Home, Qurxinta
Dhadhan: carfiso laheyn
Gubasho Time: 8 saacadood
Dhexroor, 2.2cm: Length: 22.5cm
Baako: shrinked ama bac Baakadaha
Wax soo saarka: 36tons
Gaadiidka: Ocean, Land, Air, TNT oogeen UPS
Supply Kartida: 3 × 20'fcl
shumacyo White fluted, shumac fluted multi-leh midab, shumac gabogabaysmo cad, shumac gabogabaysmo multi-midab. Our mid wax waa 100% Parafuun Wax kale waa 70% wax la shito iyo 30% oo saliid oo timir ah. packagings lagu polybag baakooyinka, baakadaha sanduuqa, dib ugama noqon baakadaha iyo bokisyada, waxaan sidoo kale keeni karaan baakada sida ay shuruudaha macaamiisha. midabada waa: white, madow, oo cagaar ah, huruud ah, buluug ah ... midab kasta oo aad dooran kartaa. sifooyinka waa dripless, qiiqa lahayn, ur, dhibic barafku sare (58 ° C-60 ° C). shumacyo Our qoyska leeyihiin grammers badan oo kala duwan, iyo tirada badan oo kala duwan, grammers waa ka 7g in 100g, dhexroorka waa ka 1.1cm in 2.5cm. waxaan karaan garaam, dhexroor dhererka iyo brand ah oo waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Hebei Shiinaha (Dhul)
Length 2cm: dhexroor 27.5cm
Litbright Shumaca Factory la aasaasay Sagaashameeyadii qarnigii la soo dhaafay. Sida soo saaraha ah la warshad ee dhulweynaha China, waxaan leenahay ka badan 10 sano ee shumac dhoofinta. aagga Our warshad ku saabsan yahay 48,000 mitir murabac oo aynu nahay mid ka mid ah soo saarayaasha ugu weyn shumac in Hebei. Waxaan leenahay ka badan 800skilled shaqaalaha iyo 40 farsamo. awoodda wax soo saarka Our: 4 × 20 'weelasha /day.These items waxaa ka mid ah tayada iyo heerka sare naqshado wanaagsan, kuwaas oo ka mid ah macaamiisha aad loo jecel yahay. waxyaabaha Our ayaa la dhoofiyo America, Europe, Africa iyo Australia, iwm ka badan siddeetan dal.
Waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
shumacyo qoyska, flameless hago keentay shumac, shumac koombada, shumac dhalaalaya, shumac tealight, shumac tiir, shumac hadiyad, shumac, shumac Yuhuudda, shumac kubada, shumac gabogabaysmo, shumac hordhigaya.
Waxaan sii wadi doonaa dadaalka loogu jiro in establsih xiriir wanaagsan la macaamiisha ku salaysan tayada wanaagsan ee, qiimaha tartan iyo adeeg qadarin, dhawaynaynaa in booqo warshad iyo wada xaajood.
Name: Fluted Shumaca
Miisaanka: 10,12g, 20g, 22g, 23g, 25g, 28g, 30g, 32g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g, 60g, 75g, 80g, 85g, 90g, 95g, 100g, iwm
Xirxirida: bokisyada, kiish bac ah, sanduuqa, warqad Kraft
Waxyaabaha ceeriin: Parafuun Wax, Stearic Acid
barta barafku High: 58 ° C - 60 ° C
1. Tusaalaha Available
2. OEM aqbalay
3. Production Arrangment warran In Time
Next: Midab shumac qoyska samaynta sahay
40cm Shumaca Tiir White
Maalinta Dhalashada White Number Shumaca
Shumaca Containe r White
Shumaca siraad White
Carrara White marmar difaacaneysa Shumaca
Jar Shumaca Ceramic White
Size kala duwan Shumaca Tiir White
Glass Shumaca Jar White
hoggaamiyo gabogabaysmo Shumaca White Abuulahab
Red White Oo Shumaca tiir Blue
White Angel Iyadoo Holder Shumaca
White Ceramic Holder Angel Shumaca
shumaca Ceramic White
White Ceramic Holder House Shumaca
White Ceramic Holder cananaaska Shumaca
Ceramic White hordhigaya Daad Holder Shumaca
Holder White Elephant shumac
White Glass Shumaca Jar
Jar White Glass Shumaca dabool
White marmar Holder Shumaca
White galaas Shumaca Holder
White jilicsan Parafuun Shumaca
White Shaaha Light shumac Christmas Gole
White Wax Shumaca Plain
shumac guriga ku cad
wax paraffine saafi ah shumaca cad
shumacyo Walmart Supermarket, qiimo wanaagsan
No ilmo la'aan qiiq shumac cadcad
shumacyo qoyska Hindiya
Wax Parafuun Best in Baako Shrinked